ASSOCIATION LA CHARITE DE MADAGASCAR: Nankalaza ny Eid Al-Fitr niaraka tamin’ireo zaza kamboty sy sahirana - Journal Madagascar
Fety lehibe ho an’ny mpino silamo ny famaranana ny volana masina Ramadany. Ny 24 mey 2020 teo no nankalazaina ny Eid Al-Fitr. Ao anatin’ny fanamarihana ity fety ity hatrany dia nizara sakafo ho an’ny ankizy sahirana sy kamboty miisa 500 ny “Association La Charité Madagascar”. Ny 26 mey 2020 teny amin’ny foibeny Andranomena. “Zaza mpino silamo sy avy eto Andranomena izy ireo. Anisany nanampy tamin’ny fanatanterahana ity hetsika ity ny CHMPI Madagascar (Championnat du Monde du Pétanque Intercommunautaire)”, hoy ny filohan’ny fikambanana, Zouber Assenjee.
Ao anatin’ny sahan’asan’ny fikambanana ny fanampiana ny mpiara-belona. Tao anatin’ny fotoana nisian’ny fikambanana dia asa sosialy maro no natao toy ny fizarana sakafo eny amin’ny fokontany, fanamboarana vovon-drano, fampitaovana ireo tobim-pahasalamana any ambanivohitra… Nohamafisin’ny filohan’ny La Charité Madagascar anefa fa tsy manao politika, tsy misy resaka antokom-pivavahana fa manao asa soa ho an’ny mpiara-belona ny fikambanana. “Ampianay avokoa ny olon-drehetra na Kristianina na Silamo”, hoy izy. Marihina fa nankatoavin’ny fanjakana malagasy fa andro tsy fiasana fa andraisan-karama ny famaranana ny volana masina Ramadany.